Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) - Hello Sayarwon
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်)
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Sodium Picosulfate ကိုများသောအားဖြင့် ဝမ်းချုပ်သောသူများ၊ အချို့သော ခွဲစိတ်မှုများ နှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ မပြုလုပ်မီတွင် ဝမ်းနှုတ်ဆေး အနေနှင့် အသုံးပြုပါသည်။
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Sodium Picosulfate သည် ညအိပ်ရာမဝင်မီတွင်သောက်ရသောဆေးဖြစ်ပါသည်။
ကလေးများအားတိုက်လျှင် အသက်အရွယ်အလိုက်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ဆေးပမာဏအတိုင်းတိကျစွာ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
Sodium Picosulfate သည်ခဏတာအတွက်သာ အသုံးပြုသင့်သော ဝမ်းနှုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည်ဆွဲသုံးလျှင် အူလမ်းကြောင်းသည် ပုံမှန်အတိုင်းမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘဲ ဆေးရှိမှသာ ဝမ်းသွားခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးသောက်ပြီး ၅ ရက်ခန့်ကြာသည့်တိုင် ဝမ်းချုပ်နေသေးပါက သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Sodium Picosulfate ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Sodium Picosulfate ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Sodium Picosulfate ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Sodium Picosulfate ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Sodium Picosulfate ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ နို့တိုက်နေခြင်း၊ ကလေးယူရန်စီစဉ်နေခြင်း များရှိလျှင်(ဝမ်းနှုတ်ဆေးများသည် ကလေးများအတွက်မူ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပါမှသာ ပေးသင့်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။)
မကြာသေးမီက အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်မှုများခံယူထားခြင်း၊ အူရောင်ရောဂါများရှိခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်တွင် ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် ဆီးဆေးများသောက်နေလျှင်
သင်သည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော၊ မိမိသဘောနှင့် သောက်နေသော ဆေးများ၊ တိုင်းရင်းဆေးများ၊ အားဖြည့်ဆေးများသောက်နေလျှင်
Sodium Picosulfate တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဗိုက်ရစ်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sodium Picosulfate ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Sodium Picosulfate က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sodium Picosulfate ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Sodium Picosulfate ၂-၄တောင့် သို့မဟုတ် ဆေးရည် 5-10 ml
ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်မီ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများမခံယူမီနေ့တွင် မနက်ဖက်တွင် ဆေးရည် 10 mg သောက်ပြီး နေ့လည်တွင်ထပ်သောက်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၂နှစ်မှ ၅နှစ် ကလေးငယ်များအတွက် အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် 2.5 mg သောက်ပါ။
အသက် ၅နှစ်မှ ၁၀နှစ် ကလေးငယ်များအတွက် အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် 2.5 mg သောက်ပါ။
Sodium Picosulfate (ဆိုဒီယမ် ပစ်ကိုဆယ်လ်ဖိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Sodium Picosulfate ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
5 mg ဆေးတောင့်
ပမာဏ 5ml လျှင်5mg ရှိသော ဆေးရည်
Sodium Picosulfate ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Sodium picosulfate.http://patient.info/medicine/sodium-picosulfate-dulcolax-pico. Accessed December 13, 2016
Sodium picosulfate.http://www.medicinesforchildren.org.uk/sodium-picosulfate-constipation. Accessed December 13, 2016